Ogaden News Agency (ONA) – Shirka wadatashiga jaaliyadaha Yurub oo ka furmay wadanka Sweden
Shirka wadatashiga jaaliyadaha Yurub oo ka furmay wadanka Sweden
Posted by ONA Admin	/ January 6, 2017
Waxaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Eskilstuna ee wadanka Sweden shir wadatashi oo ay isugu yimaadeen wufuud ka kala socota jaaliyadaha Ogadenya ee wadamada Yurub,shirkaas oo ujeedkiisa ugu weyni yahay latashiga jaaliyadaha si siwadajir ah loogu qiimeeyo xaaladaha ka taagan geeska afrika siiba kuwa Ogadenya iyo gumaysiga Itoobiya.
Shirkan oo ay hogaaminta ururka ONLF fareen jaaliyaduhu inay qabtaan ayaa lagu wada qabanayaa rugaha jaaliyadaha Ogadenya ee shanta qaaradood si loo helo fikir iyo talooyin midaysan oo waxkatara geedi socodka halganka lana jaanqaada xaaladaha cusub ee kusoo kordhay gumaysiga Itoobiya.
Shirkan oo bilowday saaka subaxii 06-01-2017 ayaa socon doona muddo sadex maalmood ah ayaa waxaa marti galisay jaaliyada Sweden,waxaana shirka goob jog ku ah qaar kamid ah madaxda ururka ee ka howl gasha wadamada yurub oo uu hogaaminayo lataliyaha gudoomiyaha JWXO Gen.Cabdullaahi mukhtaar Xuseen.
Madaxda madasha kusugan ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladaha guud,qorshayaalka u yaala halganka ee ay tahay in la qabto mudada dhow iyo tan fogba waxaana shirka lagaga dooday qodobo badan oo madaxda suaalo laga weydiiyey.
Shirka ayaa maalintiisa labaad iyo tan sadexaadba waxaa si gooni ah dodo iyo fikrado is dhaafsi ula kaliyeysan doona jaaliyadaha kadibna kazoo saari doona warmurtiyeed iyo goaamo dhaxal gal ah oo waxtar uyeelan doona halganka Ogadenya ,lana falgali kara marxalada uu halganku marayo.
Doodaha iyo warbixinada jaaliydaha iyo goaamada kala socda ONA.